Indlu enamabala amabini nezityalo ezininzi - I-Airbnb
Indlu enamabala amabini nezityalo ezininzi
Igumbi lakho lokulala e indlu sinombuki zindwendwe onguLuis Horacio
ULuis Horacio ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-100% yeendwendwe zakutshanje.
Indlu ibekwe kwibhloko enye ukusuka kwisitalato sabahambi ngeenyawo abangama-83, iibhloko ezi-5 ukusuka elunxwemeni kunye neMiguel Lillo Park, kufutshane kakhulu nendalo. Ubumelwane bunomsebenzi wentengiso obanzi kwaye ngakumbi isitalato sisisikwa esincinci, esithe cwaka kakhulu kwaye sinomlinganiselo omnandi kakhulu. ULuis noVera bahlala apho. Indlu inepatio esembindini ekhanyisa zonke iindawo. Ikhululekile kakhulu, kunye negumbi labucala eliphangaleleyo kunye neekona ezininzi zokwabelana. Kukho igrill, iincwadi kunye nomculo!
Igumbi lokulala leendwendwe lizimele ngokupheleleyo kwaye liyakhanyiswa. Ine-WI FI, umabonakude kunye negumbi lokuhlambela eligcweleyo. Indlu iyahambelana kakhulu kwaye ishushu kwiindawo zayo. Kukho iikona ezininzi eziya kuba, iincwadi kunye nomculo wokwabelana kunye neepatios ezimbini eziluhlaza, kunye ne-barbecue, ukonwabela ilanga.
Ubumelwane buzolile kakhulu kwaye kukho umoya ozolileyo olungele ukuphumla nokuphumla. Ukongeza, kukufutshane neendawo zendalo zesixeko ukuhambahamba.
Umbuki zindwendwe ngu- Luis Horacio
Umninimzi uhlala kwindlu enye nomhlobo wakhe, nangona imisebenzi yakhe imthabatha ixesha elide losuku kwaye indlu iphangalele kakhulu ukwabelana ngayo. Kukwakho nekati entle nenobubele. Abantwana abangaphantsi kweminyaka eyi-12 abamkelwa.